Ny fomba hanaovana fitsapana Clean:
Maneuverability -Here isika hijery fomba mora tokoa ny mamory hanaisotra sy hanandratra ny milina. Izahay hitsapana ny karipetra sy mafy rihana ary mitady olana toy ny milina overbalancing amin'ny marina, sy ny manovaova olana iraisana toy ny "Nifikitra" mafy loha amin'ny gorodona noho ny zara raha natao loha madio.
Carpet fanadiovana - maka fanahy isika mampiasa fotsy vovoka amin'ny karipetra sy ny fitsapana maizina rehefa afaka telo sweeps, izay iray hamafa dia niakatra sy nidina manerana ny faritra.
Edge fanadiovana - io fitsapana mijery ny fomba tsara ny milina manadio niakatra ho any an-tsisin'ny skirting zana-kazo eo anatrehanao tsy maintsy hampiasa fitaovana crevice manam-pahaizana manokana.
Hard rihana fanadiovana - fitsapana toy izany koa izahay mitarika amin'ny rihana mafy, ary mijery ny fomba madio tsara ny banga sucks vovoka niakatra avy tany-tsefatsefaky ny vatolampy sy ny banga amin'ny Flooring.
Pet volo fanadiovana - Mandra-pahoviana sy ny maro sweeps mitaky ny manadio ny 40cm-savaivony manodidina ny niasa-in pet volo.
Manadio ny tohatra - Hitantsika ny fomba mora tokoa ny hanadio ny tohatra mampiasa ny fitaovana omena. Vola manokana izahay ho mandra-pahoviana ny detachable Hose sy ny fomba mora tokoa ny mitondra ny banga madio raha toa ka mila ny.
Noise - mandrefy ny fomba tabataba izahay ny milina ao decibels ao amin'ny lohany ambaratonga.
Jereo koa isika mba hahitana izay Accessories dia ahitana, ny fomba miasa tsara izy ireo sy ny zavatra maro ny milina izany. Misy, ohatra, no tsara Mpitroka ny loto ao amin'ny asa manokana, ny hafa kosa dia manana fitaovana maro izay hahatonga azy ireo bebe kokoa misokatra ho isan-karazany.
Tsipiriany hafa isika mijery ahitana ny tady corded halavan'ny amin'ny Mpitroka ny loto, ny bateria fiainana eto cordless modely sy ny fomba mora tokoa ny hanaisotra bagless modely.
Raha toa ka manana fanontaniana, Mba andefaso olona: 86 574 63932251